Bayyanaa Sanbatuu: 'Osoo uummata kanaaf agabuu oolee bulee hojjedhuun galata dhabe' - BBC News Afaan Oromoo
Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sambatuu turtii BBC waliin taasisaniin, ''hagabuu oolee bulee osoon hojjedhuun galata dhabe, kanaafin Irreecharraa hafee'' jedhan.
"Tokkoffaa Irreecha Hora Finfinnee kana 2006 irraa jalqabnee kan itti qabsoofnee Irreechi Hora Finfinnee akka kabajamu kan qabsaa'aa bahe hayyoota keenya dabalatee abbootii Gadaafi nu'i," jedhan.
Yeroo sana Ministira Muummee kan turan Obbo Hayilemaariyaam Dessaaleny waajjira isaanii deemanii haasofsiisuun bakka Irreechi hora Finfinnee turellee akka hubachiisanis ni yaadatu.
"Bakka Irreeffanna kana isinii kennina, biyyuu keessani Giyoonii hanga Addabaabayii Masqalaa, naannoo Filwuhaa kuni akka isinii kennamu nuun jedhanii turan," jedhu Hayyuu Bayyanaan.
Yeroo sanatti erga waan hunda heeyyamaniin duubatti bakka sanattii irreeffanna jennaan ' yeroon kuni rakkoo guddaadha. Yoo namni asgaragale uummata asii kana nidammaksa mee nuuf tasgabbaa'aa nuun jedhani" jedhu.
Irreechi Hora Finfinnee kuni akka deebi'uuf hojjennee hojjennee waan galata dhabneef Irreechas hafnee mana oolle jedhan Hayyuu Bayyanaa sanbatuu.
"Ani alangeen eebbise malee Oromummaa kiyya hin eebbisne. Oromummaan keenya nurra jira. Abbaan Gadaa tokko yoo Gadaasaa wagga saddeet hojjetee xumure kabaja qaba malee salphina hin qabu."
"Nutimmoo qe'ee keenya dhiisnee kan Gadaan nutti kennite sanaaf jechan yeroo Roobalee irraa kaasee wagga 16'n hojjedhe. Yoo Laggasaa Nagawoo abbaa Gadaa ture ani maallaqa qabaa ta'een hojjedhe."
Oromoon yeroo sirni Gadaa jalaa laafee turetti itti ifaajnee sirni Gadaa kuni akka cimuuf itti dadhabeera jedhu hayyuu Bayyanaa Sanbatuu.
"Ammammoo waan hojjenneef Galata dhabeen duula badaatu narratti baname. Akka Gadaa keessaallee bahee ilmi kiyyallee hin Goodanne nagodhan osoon homaa hin balleessin. Uummata kanaaf baayyeen hojjedhe, yoon uummata kana miidheras ta'emmoo dhiifaman Gaafadha" jedhan.
Tokkummaa Oromoo fi sirna Gadaa cimsuuf jecha aarsaa guddaa kanfaluus ni himu.
"Bara 2008 mana kiyya irratti boombii darbanii qorqoorroo 24 diigan. Yoo isarratti tarkaanfii fudhanne waan hojjechaa jiru kana nidhiisa jedhaniiti. Boodammoo Irreecha Hora harsadii irratti miidhaan nurra gahe. Kuni hundi yaadatamuu dadhabe" jedhan.
Irreecha baranaa irraa kan hafanis sababuma dhamaatiin isaanii wagga dheeraa galata dhabeef ta'uu himu.
"Edaa uummata kanaaf hojjechuun galata dhabuudhaa jedheetan abbaan muudaa kiyyas abbaan Caffeetis, galata dhabne. Kanaaf garaa qulqulluudhaan Irreecha deemu malee, uummata kana wajjin duune malee maal goone jenneet mana keenyatti hafne" jedhan.
Irreecha Hora Finfinnee hafanii mana isaanii ooluu kan himan hayyuu Bayyanaa, Irreecha Hora Harsadii ammo erga irreeffattoonni galanii galgala dhaqanii maatii isaanii waliin Irreeffachuu himan.
Araara Abbootii Gadaa Tuulamaa
Waldhabdeen abbootii Gadaa Tuulamaa gidduu ture dhuguma araarri bu'eeraa jennee gaaffii gaafanneefis.
"Irreechi haa darbu jenneetuma obbo Shimallis Abdiisaatis na waamee dhiisi jennaanin kabaja isaanitiif tole jedhe malee dhugaan kiyya hin argamne," jedhan.
Araarri bu'e jedhame kunis Irreechatti deemaa wan jirruuf nagaa buusaa isin hunduu jedhameetuma cufamee irra darbame malee kan balleessetti muramee xumura hin arganne jedhan.
"Irreecha kana hin jeeqnu nuti hayyoota jedheetan ofumaa harka fuudhe malee, yookan dhugaa hin galchine yookan dhugaa hin fudhanne.
Keessi keenya garuu ammayyuu madaadha. Dhugaadhaanii miti kanin araraame ani," jedhan.
Gara fuula duraatti garuu dhugaan argamee araarri akka bu'uuf fedhii akka qaban himan.
Hojii fuula duraa
Hayyuu Bayyanaa Sanbatuu muuxannoo sirna Gadaa irratti qaban kanaan, sirnichi daran dhaloota ammaa kanan akka baratamuuf 'Koolleejjii Gadaa' banuuf hojii eegaluu himan.
"Koolleejjii Gadaa banuufan ijaarsisaa jira. Abbaa Gadaa keessa darbee muuxannoo waanin qabuuf.
Koolleejjii kana banee ijoolleen teenya tuni waa'ee Gadaa haa barattu, dhaloonni lafaa dhufu kuni akka sirritti beekee hubatu gochuufin kaayyeffadhe," jedhan.
Ijaarsa koolleejichaa jalqabuu fi heeyyama isaatiifis adeemsarra jiraachuu Hayyuu Bayyanaan BBCtti himan.